Mobil Tunai Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update]
Te hahazo vola Instant ve ianao? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny rindranasa Android izay fantatra amin'ny anarana hoe Mobil Tunai. Izy io dia fampiharana maimaim-poana izay ahafahanao mangataka fampindramam-bola isan-karazany mora foana. Manome fidirana tsotra amin'ny olona hahazoana vola haingana izy io.
Araka ny fantatrao, dia dingana sarotra tokoa ny fangatahana findramam-bola. Tsy maintsy mamaky birao sy antontan-taratasy marobe ianao hahazoana vola. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity rindranasa ity, izay ahafahanao mahazo vola haingana sy haingana.
Izy io dia manolotra ny processeurs rehetra misy amin'ity app ity. Hozarainay amin'ny antsipiriany ny dingana. Noho izany, raha hampiasa ity fampiharana ity ianao, dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra momba an'io fampiharana io alohan'ny hampiasana azy.
Topimaso momba ny Mobil Tunai App
Izy io dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Beijing Xiaowei Internet Technology. Izy io dia manolotra dingana fampindramam-bola mora, izay natao manokana ho an'i Indonezia ary olona mihoatra ny valo ambin'ny folo ihany no mangataka amin'ny serivisy rehetra.
Izy io koa dia manolotra tahiry, fifanakalozana fampindramam-bola haingana sy mangarahara ho an'ny mpampiasa. Izy io dia manome fiarovana ny mombamomba ny mpampiasa ary manome ihany koa ny politika fa tsy hizara ny mombamomba anao amin'ny antoko fahatelo izy ireo na hiditra manokana ny mombamomba anao.
Manolotra fampindramam-bola amin'ny fotoana samy hafa, izay azonao alaina amin'ity fampiharana ity. Ny vola kely indrindra dia IDR 250,000, izay azonao ampiharina ary ny ambony indrindra dia IDR 5,000,000. Azonao atao ny mampihatra isa isa eo anelanelan'ireo tarehimarika roa ireo.
The App fampindramam-bola manolotra zanabola ambany ihany koa. Ny habetsaky ny zanabola dia miankina amin'ny habetsaky ny vola sy ny vanim-potoana famerenana. Manolotra fe-potoana samihafa izy io, telo volana na 90 andro ny fe-potoana farafahakeliny ary herintaona/365 andro ny fara-tampony. Afaka misafidy izay tarehimarika, izay mety aminao.
Tokony hamerina ny vola isam-bolana ianao amin'ny zanabola kely. Io no fomba tsara indrindra hanatanterahana ny fanirianao. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary mahazoa vola eo noho eo. Raha manana olana ianao amin'ny fisintomana ity rindranasa ity dia aza misalasala mifandray aminay amin'ny fizarana hevitra.
Anaran'ny fonosana com.mobiltunai.pro
Developer PT.Small Fintech Teknologi
Endri-javatra manan-danja amin'ny Mobil Tunai
Rehefa nizara ny sasany tamin'ireo endri-javatra taminao tao amin'ny fizarana etsy ambony izahay, dia betsaka noho izay azonao trandrahana sy zaraina aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity izahay.
Easy Process hampiharana indram-bola
Vola avy hatrany
Ahoana ny fampidinana ny Mobil Tunai Apk?
Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity ianao dia azonao atao ny maka azy eto amin'ity pejy ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Ahoana ny fametrahana rakitra Apk?
Raha hametraka ny rakitra Apk dia mila manova ny toe-javatra ianao. Izahay dia hizara ny fizotran'ny fametrahana aminareo rehetra. Mila manaraka ireo dingana voalaza etsy ambany fotsiny ianao mba hanaovana fametrahana tonga lafatra amin'ny fitaovana Android.
Mandehana any amin'ny sehatry ny Settings sy Open Security
Alefaso ny 'Loharano tsy fantatra' sy ny tontonana Exit Setting
Mandehana any amin'ny fampirimana File and Open Downloads folder
Kitiho ny rakitra Apk alaina ary safidio ny safidy fametrahana
(Andraso segondra vitsy mandra-pahatapitry ny fizotran'ny fametrahana)
Mobil Tunai no fomba mora indrindra fangatahana trosa eo noho eo. Manolotra vola be izy amin'ny zanabola ambany indrindra. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fampidinana etsy ambany ary mitsidika hatrany ny anay Website ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, Finance Tags App fampindramam-bola, Mobil Tunai, Mobil Tunai Apk, Mobil Tunai App Post Fikarohana
Fall Guys Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]
Oh My Yokai Apk Download ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]